Navigator (Nano Window Film & Car DVR) နှင့် Sparkle Shin... | CarsDB
Navigator (Nano Window Film & Car DVR) နှင့် Sparkle Shine (Car Spa) ဆိုင်သစ်ဖွင့်ပွဲကျင်းပခဲ့
Navigator (Nano Window Film & Car DVR) နှင့် Sparkle Shine (Car Spa) ဆိုင်သစ်ဖွင့်ပွဲကို အမှတ်(၂၅)၊ ဝေဘာဂီလမ်းနှင့် နွယ်နီလမ်းထောင့်၊ အလုံမြို့နယ်တွင် မေလ ၁၂ ရက်နေ့၌ နံနက် ၁၀ နာရီမှ နေ့လည် ၁၂ နာရီထိ ကျင်းပခဲ့သည်။
Navigator (Nano Window film & Car DVR) နှင့် Sparkle Shine (Car Spa) ဆိုင်သစ်တွင် Navigator အမှတ်တံဆိပ် car black box (CCTV) များဖြစ်ကြသော NAV-K9 (car DVR)၊ NAV-F36 (tracker)၊ NAV- A9 (GPS long track playback)၊ 360ံcar DVR recording စသည်တို့အပြင် LLumar အမှတ်တံဆိပ် Nano Window Film တို့ကိုလည်း ရောင်းချပေးကြောင်းသိရသည်။ ထို့အပြင် Window Film ကပ်သော ကားများအား ကျေးဇူးတုံ့ပြန်သောအားဖြင့် ကားရေဆေး၊ ပေါလစ်တိုက်ခြင်းကိုလည်း မေတ္တာလက်ဆောင်အဖြစ် အခမဲ့ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ဆိုင်သစ်ဖွင့်ပွဲ special promotion အဖြစ် Nagivator အမှတ်တံဆိပ် safe route ပစ္စည်းများကိုလည်း မူရင်းဈေးထက် လျှော့ကာရောင်းချပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
Navigator အမှတ်တံဆိပ် ကားပစ္စည်းများကို Auto Myanmar Car DVR Co.,ltd. မှ authorize distribution လုပ်ကိုင်ခွင့် mou လက်မှတ်ရေးထိုးကာ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးသို့ဖြန်ဖြူးရောင်းချပေးလျက်ရှိသည်။
Navigator (Nano Window Film & Car DVR) နှငျ့ Sparkle Shine (Car Spa) ဆိုငျသဈဖှငျ့ပှဲကို အမှတျ(၂၅)၊ ဝဘောဂီလမျးနှငျ့ နှယျနီလမျးထောငျ့၊ အလုံမွို့နယျတှငျ မလေ ၁၂ ရကျနေ့၌ နံနကျ ၁၀ နာရီမှ နလေ့ညျ ၁၂ နာရီထိ ကငျြးပခဲ့သညျ။
Navigator (Nano Window film & Car DVR) နှငျ့ Sparkle Shine (Car Spa) ဆိုငျသဈတှငျ Navigator အမှတျတံဆိပျ car black box (CCTV) မြားဖွဈကွသော NAV-K9 (car DVR)၊ NAV-F36 (tracker)၊ NAV- A9 (GPS long track playback)၊ 360ံcar DVR recording စသညျတို့အပွငျ LLumar အမှတျတံဆိပျ Nano Window Film တို့ကိုလညျး ရောငျးခပြေးကွောငျးသိရသညျ။ ထို့အပွငျ Window Film ကပျသော ကားမြားအား ကြေးဇူးတုံ့ပွနျသောအားဖွငျ့ ကားရဆေေး၊ ပေါလဈတိုကျခွငျးကိုလညျး မတ်ေတာလကျဆောငျအဖွဈ အခမဲ့ဆောငျရှကျပေးမညျဖွဈသညျ။ ဆိုငျသဈဖှငျ့ပှဲ special promotion အဖွဈ Nagivator အမှတျတံဆိပျ safe route ပစ်စညျးမြားကိုလညျး မူရငျးဈေးထကျ လြှော့ကာရောငျးခပြေးသှားမညျဖွဈကွောငျးသိရသညျ။
Navigator အမှတျတံဆိပျ ကားပစ်စညျးမြားကို Auto Myanmar Car DVR Co.,ltd. မှ authorize distribution လုပျကိုငျခှငျ့ mou လကျမှတျရေးထိုးကာ မွနျမာတဈနိုငျငံလုံးသို့ဖွနျဖွူးရောငျးခပြေးလကျြရှိသညျ။
Posted at: 13-05-2019 10:45 AM
Navigator (Nano Window Film & Car DVR) နှင့်...